नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एउटी नेपाली छोरी आफ्नो देशको नागरिक हुनबाट वञ्चित हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने ??
एउटी नेपाली छोरी आफ्नो देशको नागरिक हुनबाट वञ्चित हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने ??
एउटा हृदय बिदारक घटनाको सचित्र बर्णन !
त्यसो त, पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्रबारे चर्चा हुने अरू पनि कुरा थिए, तर पारिवारिक जीवनको कुरा गर्दा उनीसँगै जोडिएर आउने गरेको अर्को नाम थियो, जया पाण्डे शाह । जया र धीरेन्द्रबाट एक छोरीको जन्म भएको त्यतिबेलै सुनिएको थियो । यस अर्थमा विदेशमा रहेकी प्रेमिकासँगको विवाह धीरेन्द्रको तेस्रो थियो भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो । धीरेन्द्रबारे गुगल सर्च गर्नेहरूले अहिले पनि पढ्ने यही कुरा हो, ‘सन् १९५० मा जन्मिएका धीरेन्द्र श्री ५ महेन्द्रका कान्छा छोरा हुन् । उनलाई जन्म दिँदा उनकी आमा इन्द्रराज्यलक्ष्मीको निधन भएको थियो । उनकी पहिली पत्नी प्रेक्षाबाट तीन छोरी छन् । दोस्री पत्नी जया पाण्डेसँग अप्रिल २२, १९८६ मा दक्षिणकालीमा उनको विवाह भयो । जया र धीरेन्द्रबाट सन् १९८८ जुन १६ मा एक छोरी जन्मिइन् जसको नाम श्रेया शाह हो । क्यानडामा जन्मिएकी ब्रिटिस नागरिक सिरले ग्रेनीसँग तेस्रो विवाह
भयो, सिरलेबाट सन् १९९३, जुलाई २२ मा एक छोरी जन्मिइन्, जसको नाम उहाना लैला शाह हो । आफ्नी बैनी प्रेक्षालाई छोडेर अर्को विवाह गरेपछि रानी ऐश्वर्यले उनलाई श्री ५ को पदवीबाट मुक्त गरिदिएकी थिइन् ।’
एक वर्षसम्मको नागरिकताको लडाइँमा असफल भएर श्रेया अमेरिका जानुलाई मैले आफ्नो पनि असफलता ठानेकी छु । एउटी नेपाली छोरी आफ्नो देशको नागरिक हुनबाट वञ्चित हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने, कलिलो युवा मानसिकतामाथि प्रहार हुँदा बचाउन नसक्नेले न्यायको कुरा गर्न सुहाउँछ ? यो प्रश्नले पटकपटक मेरो आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्ने गरेको छ । जनताका लागि सबैभन्दा उन्नत भनिएको राजनीतिक व्यवस्थामा एउटा नागरिक अनागरिक बनिरहँदा मैले केही गर्न सकिनँ, आईएम सरी श्रेया ! - घटना र बिचार
Posted by www.Nepalmother.com at 2:31 PM